Umhlaba wezoLimo kwiRhafu kwiRealWW
Ifama yendlu yerente e-Ocala, eFlorida
Indawo eyenziwe ngokupheleleyo yindlu enamagumbi okulala ayi-3. Wonke umgangatho omtsha womgangatho, iikhaphethi, iikhabhathi ezineyadi ebiyelweyo. Iibhola ezine ezixhasayo ezineearhente ezivenkileni. Igumbi lokuthambisa, igumbi lokutya, ukuhlamba i-rackbunkhouse ngebhafu epheleleyo. Ukukhanya kwe-2x150 enkundleni. Iipaddi ezimbini, idlelo elinye le-acre enye li-250. Ipropathi ...
Ocala in Florida, 34473
Published by Pamela Burner
Ifama yendlu yerente eAnthony, eFlorida
Indawo ye-RV nge-Horse Lodging. Wamkelekile kwiihektare ezingama-25 zendawo enoxolo kwi-RV yakho kunye nehashe! Umhlaba omi kakuhle, Oaks ecekethekileyo, sete serene. Imizuzu yokondla kwiivenkile / kwifama. Inyanga okanye iXesha lokuhlala. Ixabiso libandakanya ivenkile. (Iindawo ezongeziweyo zisenokufumaneka). Kwi-RV: 50/30 Amp zombane, amanzi kunye se ...
Anthony in Florida, 32617
umbono Umhlaba wezoLimo ishicilelwe kwiinyanga 2 ezidlulileyo
Ifama entle ekwimeko entle kakhulu kwindawo entle kakhulu inokuba yeyakho kwixesha okanye ixesha elide. Yonke into oyifundileyo ikhona. Uya kuba nekhitshi le-chef, i-4 / 3 1 / 2 baths, office, in pool komhlaba, 2 barns, 1 / 1 apt, dibanisa iipadocks, kufutshane neendawo zemiboniso, indawo enkulu yokuma ...
Published by Laurie Whelpley-baker
Umhlaba wezoLimo kwiRhafu eKira
I-15decimals in kira kwi-90m
Umhlaba wezoLimo kwirente eKisaasi
Plot kwi-Kisaasi 210m 25 Decimals
Yila indawo yokuthengisaKisaasi Komamboga Rd 90m 15 Decimals
Umhlaba wezoLimo kwiRente eNamugongo
Iziza ziyathengiswa !! Idolophu yaseSsonde 70m 50x100ft (Emva iyonke)
Umhlaba wezoLimo kwirente eBunga
Iipesenti ezingama-50 zesiza somhlaba othengiswayo eBunga, kulungile ukuba indlu yokuhlala okanye indlu ifakwe kwindawo elungiselelwe kakuhle.
Umhlaba wezoLimo uqeshiswa eMityana
Izikwekhilomitha ezingama-3.5 okanye i-2240 yeehektare zomhlaba othengiswayo uthinta ichibi laseWamala kwisithili saseMityana.umhlaba ulunge kakhulu wokukhula kwezityalo nokukhulisa izilwanyana.Ichukumisa iLake Wamala elinokubonelela ngamanzi okunkcenkceshela.Umhlaba ukwiikhilomitha ezili-100 ukusuka kumbindi weSixeko iKampala. .Ixabiso lokubuza liyi-:: yezigidi ezi-3.2 nge ...
Umhlaba wezoLimo kwiRente eNaalya
Iipropati eziphambili ezithengiswayo #Naalya kumgangatho ophakamileyo wokuthenga zineetayitile ezifanelekileyo kwiidenki eziyi-15 kwi-90m ugx kwi-17 ye-100m, i-18 decimals kwi-110m